KEHLANI: NGELIXA SILINDE UKUJONGWA KWEALBHAMU - IINDABA
Iprojekthi ye-Oakland R&B yomculi wamva nje ngumzekelo oqaqambileyo wobukrelekrele bemvakalelo kunye nokubhalwa kwengoma kwakhe okuhle.
Umntu othile phaya ufuna ukuyiva le nto, utshilo uKehlani, ngokuqiniseka, kumkhondo wokuqala wesibini, 2015 Kufuneka ubelapha . Eso sihloko sinamagama amane sisodwa sityhila ubukrelekrele bakhe beemvakalelo kunye novelwano olungaqhelekanga-ehambelana nokungabikho kokusesikweni kwamalungu osapho asweleka ngaphambi kokuba babhubhe, kubahlobo abalahlekileyo, nakwindlela abathandekayo abanokubakho ngayo nokuba sele bemkile kudala. Ndizive iintlungu ngakumbi kunokuba abanye beya kuthanda ebomini babo bonke, ngaphambi kokuba babe neminyaka yokuba nako ukuthenga isiselo sokuntywila ebharini, uqhubeke uKehlani Kufuneka ubelapha Ukuvula i-monologue, ukuseta iqonga kunye nokucoca umoya kuyo yonke imvakalelo eluhlaza eya kulandela.
Kuhambo lwakhe ukusuka kulutsha olunendlebe egalelwe i-America's Got Talent kuye kwi-zen-njengaye uqobo-isilumko somculo we-pop, impilo ye-app guru, Yiza Njengokuba Unemvambo ngaphezulu komfanekiso weLauryn Hill kwibhicep yakhe yasekhohlo-uKehlani, ngoku U-23, uthethe gca malunga nokulwa kwakhe nempilo yengqondo kunye nobuntwana bakhe obunzima, efanisa abazali bakhe noBonnie noClyde. Kodwa kwixesha losizi oludandathekileyo kwi-pop kunye ne-rap, iingoma zikaKehlani zixinene nethemba. Ingqondo, isiqwenga somoya opholileyo we-2017 LP yakhe yokuqala LumNiniLa , yayingumhobe ohleliweyo malunga nokufumana kwakhona ukuzola kunye nokuzixabisa emva kwexesha elinengxaki yengqondo. Umculo kaKehlani uyayazi intlungu, kodwa umxholo wawo kukusinda.
Ngelixa Silindile yiprojekthi yesine kaKehlani: i-mixtape yakhe yesithathu kwaye okokuqala ukusukela LumNiniLa . Ngokufanelekileyo ngesihloko, yenziwa ngexesha lokukhulelwa kwakhe (Intombi kaKehlani kufanelekile ngoMatshi) kwaye sesona sikhululo sakhe someleleyo, esona singekhoyo. Uluhlu lokudlala lomculo oqhelekileyo khange lukuthintele ukuqokelelwa okuthe ngqo okuhlaziyiweyo kweepop, rap, kunye ne-90s ye-R & B yomelele. Ukuzihlonela kwe-jam yozuko lwasekuseni kukhupha i-TLC, ukuzimela, kunye nokuqokelelwa. Eyona nto imnandi yeTape, uNunya, ufana noKehlani Bug A Boo , kunye nekhonkco le-monster ukufanisa i-monster kiss-off yayo: Ubeka umboniso / 'Isizathu sokuba awufuni ukuba umhlaba wazi / Ukuba ulahlekelwe yintombazana eyayifumana yedwa. Kwaye i-Footsteps evulekileyo yingelosi-neo-soul kunye nemvakalelo ehlabayo kaJoni Mitchell. Xa ndandihamba / ndishiya iinyawo eludakeni ukuze undilandele, uKehlani uyacula, uluvo nje oluhle ngokushiya umntu nokuba awufuni.
Iingoma ezilithoba Ngelixa Silindile ngamanye amaxesha ndiziva ngathi ngumdlalo obhaliweyo malunga nokuba uthando kunye nokunxibelelana kunokuba nzima kangakanani na kumxhelo wethu ophakathi. UKehlani udibana noontanga abanjengo-SZA kunye noDrake ekuboniseni ezo zinto zingathandekiyo emva koko abanye, behluza ukwenzakala okudlulileyo, iimvakalelo ezicinezelweyo, ukusilela kolwimi, kunye neengxaki zobudoda. Abalinganiswa bakhe abaziintloko baphuke abantu abanemithwalo bezama ukuqonda omnye nomnye: U-Shoulda akazange akunike intliziyo yam ukuba ithumele izinto, ucula kwi-banger eqhekezayo yomoya oqaqambileyo Ubusuku obunjengobu, kwaye izinto zikhula nzima ukusuka apho. Kodwa uKehlani uyanyathela kwezi zilwandle, akhangele iiankile, kwaye akoyiki kumaza alwayo. Ndiyakubona udada kwaye uyaphepha kuyo yonke into egobileyo, uhlebeza kwi-Butterfly, esemngciphekweni, eqinisekisa iqabane ukuba, Ayizukukwenza ube yindoda / Ukophula iindonga zakho kwaye ubambe nje isandla sam. Yonke umculo kaKehlani-kodwa akukho namnye kangako Ngelixa Silindile -Ziva ngathi ukuthatha ii-TLC's Yonakele kwaye ndizama ukuyiphilisa.
Ukuqaqanjelwa okungenakulindeleka, emva koko, ukujula kakhulu kukungenelela kwe-labyrinth, kujikeleza kwikwayala yeqela lamantombazana aphantsi eKehlani abathi bonke babalise loo meko yokuziva ubethakala ngesiquphe, uyingozi entlokweni yakho. Sasiyi-candy crushin, uKehlani uyadanduluka, Kodwa le nto ingena nzulu kakhulu. Ngaphandle komxholo wayo owehlileyo, Ubunzulu obukhulu kakhulu buyonwabisa. Ndiyathanda ukuba nomfanekiso-ngqondweni kaKehlani emamele iqhawe lakhe, uMariah Carey, kwingoma yakhe engafiyo Sidibana kunye , Ukuphawula oku kunzulu malunga naloo ngoma kaBobby Womack kwirediyo yakhe, emva koko wenze ingoma esekwe kolo luvo luchanekileyo.
Eyona nto ityumkileyo Ngelixa Silindile umkhondo ziinyawo, inyani yokunyaniseka kunye nomonde ekuvukeni kobudlelwane obungasebenzi kakuhle. Iqulethe i-melancholy yemilingo, uhlobo oluniphakamisayo. Chwayita kukunyaniseka / Akukho namnye kuthi owayaziyo into esiyifunayo, uye warhoxa kwaye engaqhelekanga ebantwini. Umgca onamandla ngokulinganayo — malunga nokuthambekela kwamadoda ekusebenziseni abantu basetyhini njengonyango- uza kamva kwimvumi edumileyo uMusiq Soulchild: Ndikuphathe njengeyeza / Kodwa ndiyaqonda ukuba andimameli. Inyaniso kaKehlani, nangona kunjalo, ikhala ngokuvakalayo. Ngaphesheya Ngelixa Silindile , Lucidity her is pure pure, kodwa iinyawo ziyacaca kwaye zicombulule ukuba ufuna ukuthoba intloko xa iphela. UKehlani usifundisa indlela yokuthetha omnye komnye, kwaye kwinkqubo, ilizwi lakhe liye lavela ngokucacileyo ngakumbi kunangaphambili.
iiprojektha ezimdaka zinyuka ngaphezulu
udonga michael jackson
Ingoma entsha yemill mill
wumunce kwaye ubone iinkawu zearctic